Zvakaita Kuti Jesu Ave Neupenyu Hunofadza Uye Hunogutsa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
JESU aiva neupenyu hunofadza uye hunogutsa zvechokwadi here? Zviri pachena kuti akakurira mumhuri yevarombo uye akanga asina zvokurarama nazvo zvakawanda muupenyu hwake hwese. Akanga asitomborina “pokuisa musoro wake.” (Ruka 9:57, 58) Uyewo aivengwa, akacherwa, uye akazourayiwa nevavengi vake.
Pamwe ungati, ‘Handifungi kuti ihwohwo ndihwo hunganzi upenyu hunofadza uye hunogutsa!’ Asi pane zvimwewo zvakawanda zvakaitika kuna Jesu zvatinoda kuongorora. Ngatimboonai zvinhu zvina nezveupenyu hwake.
1. JESU AIVA NECHINANGWA CHOKUITA KUDA KWAMWARI MUUPENYU HWAKE.
“Zvokudya zvangu ndizvo kuti ndiite kuda kwaiye akandituma.”—Johani 4:34.
Zvaitaurwa naJesu uye zvaaiita zvairatidza kuti aida kuita kuda kwaBaba vake vokudenga Jehovha. * Kuita kuda kwaMwari kwaiita kuti afare zvikuru. Akatofananidza kuita kuda kwaMwari nezvokudya sezviri murugwaro ruchangobva kutaurwa. Funga kuti zvinhu zvakanga zvakamira sei paakataura mashoko iwayo.
Jesu anofanira kunge akataura mashoko iwayo ava masikati. (Johani 4:6) Aitova nenzara nokuti akanga apedza mangwanani ose achifamba nemumakomo ekuSamariya. Vadzidzi vake vakanga vatomukurudzira vachiti: “Rabhi, idyai.” (Johani 4:31) Mhinduro yaJesu yakaratidza kuti kuita basa raMwari kwaiita kuti agutsikane uye asimbiswe zvikuru. Izvi hazviratidzi here kuti murume uyu aiva neupenyu hunofadza uye hunogutsa?
2. JESU AIDA BABA VAKE ZVIKURU.
“Ndinoda Baba.”—Johani 14:31.
Jesu aiva neukama hwepedyo chaizvo naBaba vake kudenga. Kuda kwaaiita Mwari zvikuru kwakaita kuti azivise vanhu nezvaBaba vake, zita ravo, zvinangwa zvavo uye unhu hwavo. Mashoko aJesu, zvaaiita, uye unhu hwake zvakanyatsoratidza zvakaita Baba vake zvokuti patinoverenga nezvake tinoita setiri kutoona zvakaita Baba vake. Ndokusaka Firipi paakati kuna Jesu: “Tiratidzei Baba,” Jesu akamupindura kuti, “Aona ini aonawo Baba.”—Johani 14:8, 9.
Jesu aida Baba vake zvikuru zvokuti aida kuvateerera kusvikira parufu. (VaFiripi 2:7, 8; 1 Johani 5:3) Kuda Mwari zvikuru kwakaita kuti Jesu ave neupenyu hunofadza uye hunogutsa.
3. JESU AIDA VANHU.
“Hapana ane rudo rukuru kune urwu, kuti mumwe munhu ape mweya wake nokuda kweshamwari dzake.”—Johani 15:13.
Sezvo tiine chivi, remangwana redu harina kujeka. Bhaibheri rinozvitsanangura richiti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete [Adhamu] uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.” (VaRoma 5:12) Hatigoni kuzvinunura parufu urwo rwakakonzerwa nechivi.—VaRoma 6:23.
Zvinofadza kuti Jehovha akaita urongwa hwokugadzirisa matambudziko evanhu. Akabvumira kuti Mwanakomana wake Jesu uyo akanga asina chivi kuti afe kuitira kuti ave rudzikinuro rwaidiwa kuti vanhu vanunurwe muuranda hwechivi nerufu. Jesu akabvuma kutifira semunhu asina chivi nokuti aida Baba vake uye vanhu. (VaRoma 5:6-8) Rudo irworwo rusina udyire rwakaita kuti afare uye agutsikane muupenyu. *
4. JESU AIZIVA KUTI AIFARIRWA UYE AIDIWA NABABA VAKE.
“Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandafarira.”—Mateu 3:17.
Jehovha akataura mashoko iwayo ari kudenga pakabhabhatidzwa Jesu. Ipapo Jehovha akaratidza pachena kuti aida uye aifarira Mwanakomana wake Jesu. Ndokusaka Jesu akataura zvakasimba kuti: ‘Baba vanondida!’ (Johani 10:17) Kuziva kuti Baba vake vaimufarira uye vaimuda kwakaita kuti Jesu ave noushingi hwokutsungirira paaipikiswa uye paaishorwa. Kwakaitawo kuti asatya kunyange paakanga atarisana nerufu. (Johani 10:18) Kuziva kwaiita Jesu kuti anodiwa uye anofarirwa naBaba vake kwakaita kuti anyatsofara uye agutsikane chaizvo muupenyu.
Zvechokwadi Jesu aiva neupenyu hunofadza uye hunogutsa. Zviri pachena kuti tinogona kudzidza zvakawanda kwaari nezvezvatingaita kuti tive neupenyu hunofadza uye hunogutsa zvechokwadi. Nyaya inotevera ichataura nezvemamwe mazano akajeka akataurwa naJesu kuvateveri vake nezvemararamiro avaifanira kuita.
^ ndima 15 Kuti udzidze zvakawanda nezvekukosha kwerudzikinuro rwakapiwa nerufu rwaJesu, ona chitsauko 5 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.